Samsung waxay dib u dhigeysaa soo saarida afhayeenka caqliga leh si ay ula tartanto HomePod | Wararka IPhone
Intii lagu guda jiray soo bandhigida Samsung Galaxy S9 iyo S9 + Axadii la soo dhaafay, waxaan arki karnay sida shirkadda Kuuriya diirada saaray qayb ka mid ah soo bandhigida guriga ku xidhanUma aysan soo bandhigin aalado casri ah sida aan jeclaan lahayn, in kastoo, iyadoo shirkadda Bixby ay maamusho af-hayeenka caqli-galku ay tahay isku aadka ugu weyn.
Aniga oo tixgelinayna taas Snapdragon 845 wuxuu kuu ogolaanayaa qol badan in lagu ciyaaro iyadoo loo marayo Bluetooth, iyada oo aan loo baahnayn in la adeegsado teknoolojiyad cusub ama hore u diiwaangashan sida AirPlay, afhayeenka caqliga leh ee Samsung ay ku shaqeyneyso oo ay maamuli doonto shirkadda Bixby ayaa ka mid ah alaabada ay isticmaaleyaashu aadka u rajeynayaan.
Sida laga soo xigtay madaxa qaybta mobilada ee Samsung, DJ Koh, taariikhda loo qorsheeyay in lagu soo bandhigo afhayeenka caqliga leh ee shirkadda Kuuriyada Koonfureed waxaa marki hore loo qorsheeyay qeybta labaad ee 2018, laga yaabee ka hor dhamaadka sanadka, inkasta oo waa laga yaabaa inuu horay u sii socdo oo uu gacantiisa ku soo bandhigo Galaxy Note 9, dhacdo haddii ay raacdo isbeddellada sanadihii hore, la soo bandhigo dhammaadka bisha Ogos ee sannadkan.
DJ Koh ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay Wall Street Journal in wuxuu ka shaqeynayaa horumarinta afhayeenka caqliga badan, oo aan ka helnay warka ugu horreeya dhammaadka Diisambar. Dib u dhacani wuxuu u oggolaanayaa Apple inay dejiso iibka HomePod ee suuqa ka hor inta shirkadda Korea aysan bilaabin afhayeenkeeda koowaad.
Aniga oo tixgelinayna taas Samsung waa milkiilaha hadda ee Harman International, shirkad hoostagta oo ay ka mid yihiin shirkadaha AKG, JBL, Bang Olufsen, Harman Kardon, Infinity iyo kuwa kale oo waaweyn, haddii shirkaddu si fiican u qabato, waxay suuqa ka soo saari kartaa qalab u noqon kara tixraac xagga waxyaabaha aan illaa hadda ka ognahay ku hadla ku hadla. Waqtigan xaadirka ah waa inaan sugnaa inta ay wararka xanta ahi bilaabayaan inay qabsadaan shaqadooda si aan u aragno waxa Samsung ay noogu deeqi karto arimahan.
Dabcan, waa wax lafilan karo ilaa ay ka gaarto suuqa, kaaliyaha shirkada Kuuriya, Bixby waxay balaarisay tirada luuqadaha ay ku hadasho. Sida laga soo xigtay wararka xanta ah, luqadda xigta ee uu ku hadli doono wuxuu noqon doonaa Isbaanish, oo hadda ah Ingiriisiga iyo Kuuriyaanka luuqadaha uu isagu ku badan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Samsung waxay dib u dhigeysaa soo saarista afhayeenka caqliga leh si ay ula tartanto HomePod